Nagu saabsan - Shandong Lu Young Makiinado Co., Ltd.
Shandong Lu Young Makiinado Co., Ltd. waxaa la aasaasay bishii Luulyo 1996. Waxaan ku sugnaa shandong provice. Waxaan ka soo dhoofsanay tikniyoolajiyad wax soo saar horumarsan iyo kooxda R&D kooxda Kuuriya sanadkii 2001 waxaana dhisnay warshaddeena sedexaad ee wax soo saarka mashiinka lathe ee swiss. Waxaan soo saari karnaa in kabadan 1000 nooc qalabka mashiinka cnc hal sano. Qalabkeena mashiinka cnc-ka waxaa laga dhoofiyay in ka badan 40 dal oo ka hel jawaab celin wanaagsan.
Waxaan leenahay ilaa 500 oo wokers iyo 40 injineero, in ka badan 50000㎡ ka shaqeeya dukaan iyo 1000 andoffice space. Kooxdayada injineerku waxay leeyihiin waayo-aragnimo hodan ah oo ku saabsan xulashada qalabka iyo qaabeynta hannaanka, waxaan ku siin karnaa xalka xirfadeed ee ku saleysan qalabkaaga shaqada si dhakhso ah oo xor ah.
Dhamaan mashiinadeena CNC waxay u ekaadeen heerka caalamiga ah ee 'ISO code', waxayna ku dadaalayaan horumarinta sumcadda, iyo ujeedka macaamiisha marka hore. Ficil ahaan lagu gaaro badeecado tayo wanaagsan leh, adeeg tixgelin leh, bixinta waqtiga ku habboon, qiimo macquul ah, isla markaana u siiya dadka isticmaala wax soo saar wanaagsan, Shirkadda waxaa doorbiday ganacsatada iyo isticmaaleyaasha gudaha iyo dibaddaba sumcad wanaagsan iyo adeeg aad u wanaagsan.
IN KA BADAN 20 SANO OO XIRFAD LEH KU SAABSAN MAGAALOOYINKA CNC
Shandong Lu Young Makiinado Co., Ltd. waxaa la aasaasay bishii Luulyo 1996, oo ku taal shandong provice. Tikniyoolajiyad wax soo saar sare leh iyo kooxda R&D oo laga keenay Kuuriya sanadkii 2001. Waxaa laga dhoofiyay in kabadan 40 wadan oo waxaad kaheleysaa jawaab celin wanaagsan. Dhamaan mashiinada waxay dhaafeen aqoonsiga Midowga Yurub CE waxaana lagu caddeeyay ISO 9001.
Shirkadeenu waxay leedahay in kabadan 50 nooc oo mashiin ah, oo ay kujiraan sariir fidsan iyo sariir qallooca CNC, 3-dhidib, 4-dhidib, 5-dhidib mashiinka axdi qarameedka CNC, siwss nooca cnc mashiinka lathe, lathe caadiga ah, mashiinka wax lagu jaro.
1. Qaabeynta tayo sare leh
Qaybaha ugu muhiimsan waa soo-dejinta ama qaybaha caanka ah ee caanka ah, sida nidaamka Japanese FANUC, Japanese NSK sita ama Jarmalka FAG, German Siemens system xakamaynta, French Schneider, Taiwan ROALY spindle, OKADA auto tool changer, Taiwan Hiwin linear guide way, GSKontroller nidaam iwm
2. Xoog R & D Xoog leh
Waxaan haynaa 40 injineer oo kujira xarunteena R&D, dhamaantoodna waxay khibrad badan u leeyihiin arimahan.
3. Xakamaynta Tayada oo Adag
Waxaa jira shay baaris iyo shaybaarro gaaraya 45, 48 saacadood oo lagu hagaajinayo baaritaanka culeyska istaroogga oo buuxa, iyadoo la adeegsanayo qalabka ugu sarreeya adduunka ee lagu baaro sida mashiinka cabbiraadda ee saddex-iskudhafka ah, British-ka ERNISHAW laser F interferometer, iyo Japanese SIGMA firfircoonida dheelitirka hubi xakamaynta saxda ah ee dhammaan faahfaahinta qalabka mashiinka.
4. OEM & ODM La Aqbali Karo
Qaabeynta kartoo, muuqaalka ayaa la heli karaa. Ku soo dhowow inaad nala wadaagto fikraddaada, aan ka wada shaqeyno sidii aan noloshu u noqon lahayn mid hal-abuur leh.
Wax soo saarkayagu dhammaantood waxay gudbaan Shahaadada CE, iyo warshadeennu waxay ka gudubtaa Shahaadada Tayada ee ISO9001. Mashiinnadayada waxaa laga dhoofiyay in ka badan 40 dal. Waxaan soo dhaweyneynaa dhammaan macaamiisha iyo asxaabta inay soo booqdaan warshaddeena!
Marka laga hadlayo xoogga farsamada, waxaan leenahay shaqaalaha ugu caansan ee cilmi baarista iyo horumarinta, kuwaasoo buuxin kara dhammaan shuruudaha kala duwan ee tikniyoolajiyadda iyo wax soo saarka. Waxaan aqbalnaa qaabeynta qaabeynta, waxaan ku sameyn karnaa mashiinka dalabkaaga. Haddii aad hayso wax codsi gaar ah, kooxda qaabeynta xirfadeed ayaa mid mid ku siin kara qaabeynta ugu habboon.
Iibinta dhammaantood waa iibiyaal xirfadlayaal ah oo kaa caawin kara xallinta dhibaatooyinka iibsiga iyo tikniyoolajiyada la xiriira qalabka CNC iyo mashiinnada imtixaanka. Alaabtayada waxaa lagu iibiyaa gudaha iyo dibaddaba, waana kuwo caan ka ah adduunka oo dhan.